Horudhac: Leicester City vs Arsenal… (Foxes oo doonaysa inay bandhiggeeda wacan sii joogteyso marka ay caawa soo dhoweynayso Gunners) – Gool FM
(Leicester) 09 Nof 2019. Leicester City ayaa isku dayi doonta inay sii wadato qaab ciyaareedkeeda ugu fiican marka ay martigeliso Arsenal kulan ka tirsan Premier League caawa oo Sabti ah.
Kooxda kaalinta saddexaad ee Foxes ayaa guuleysatay todobo ka mid ah sagaalkii kulan ee ugu dambeeyay, waxayna dhalisay 26 gool waqtigaas, halka laga dhaliyay kaliya todobo gool, waxaana caan ka ahaa kulammadaas kii ay 9-0 ku garaaceen Southampton labo isbuuc ka hor.
Arsenal ayaa bilaaban doonta isbuucaan, iyadoo labo boos oo ka hooseysa Leicester, laakiin waxay ku guuldarreysteen inay badiyaan saddexdii kulan ee ugu dambeeyay, waxaana laga badiyay todobo ka mid ah 14-kii kulan ee ay marti ahaayeen sanadkan 2019.
Tababaraha kooxda Leicester City ee Brendan Rodgers ayaa waxa uu haystaa koox taam buuxda ah kulanka caawa oo Sabti ah ay ka horjeedaan Arsenal.
Qofka kaliya ee ka maqani waa Matty James oo bilaabay tababarka fudud markii uu ka soo kabsaday qalliin lagu sameeyey.
Arsenal ayaan heli doonin adeegga Dani Ceballos ciyaarta macallin Unai Emery uu kulankiisii 50-aad ee Premier League uu caawa hogaamiyo Gunners.
Xiddiga khadka dhexe ee amaahda ah Ceballos ayaa dhaawac uu ka soo gaaray muruqa lugtiisa bidix intii lagu jiray kulankii Arbacadii ee Europa League oo ay la ciyaareen Vitoria, waxaana laga yaabaa inuu sidoo kale xulkiisa Spain ka maqnaado kulammada isreeb-reebka ee Euro 2020.
>- Kooxda Leicester ayaa guuleysatay labadii kulan ee ugu dambeeyay oo ay garoonkeeda horyaalka Premier League ku wajahday Arsenal – Waligood kuma garaacin Gunners saddex kulan oo isku xigta horyaalka oo ay gurigooda kula dheeleen.
>- Arsenal ayaa laga badiyay labo ka mid ah saddexdii kulan ugu dambeeyay ee horyaalka ay ka horyimaadeen Leicester, waxaana ay gaareen 1 guul, waana in ka badan intii ay kala kulmeen 30-kii kulan ee ay ka horyimaadeen Foxes oo ay ka heleen 20 guul, 9 barbaro iyo 1 guuldarro.
>- Leicester ayaa badisay siddeed ka mid ah 11-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay Premier League ku ciyaareen garoonkooda, waxaana ay haysataa (8 guul, 2 barbaro iyo 1 guuldarro) oo ay ku jiraan afartii kulan ee ugu dambeeyay oo isku xiga, Foxes waxay kaliya guuleysatay shan jeer oo isku xigta hal jeer oo hore, iyagoo sidaas sameeyay bishii May sanadkii 2017-kii, markaasoo ay ka hoos shaqeynayeen macallin Craig Shakespeare.
>- Leicester ayaa guuleysatay todobo ka mid ah sagaalkii kulan ee ugu dambeeyay oo ay ciyaartay horyaalka Premier League, iyadoo labada kulan ee kalena guuldarro la kulantay, ugu yaraan labo gool ayey dhalinaysay guul kasta, markii ay ku guuldarreysteen inay dhaliyaan wax ka badan hal gool Leicester ayaan guul gaarin 13-kii kulan ee ugu dambeeyay Premier League tan iyo markii ay garaacday Everton bishii Janaayo, waxaana ay la kulmeen 4 barbaro iyo 9 guuldarro.
>- Tan iyo markii ay Manchester City ku soo garaaceen garoonka Etihad bishii Janaayo sanadkii 2015-kii, Arsenal ayaa ku guuldarreysatay inay bannaanka ku soo badiso mid kasta oo ka mid ah 11-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay marti ahaayeen horyaalka Premier League, isla markaana ay la ciyaareen kooxaha maalintaa ka mid ah saddexda koox ee ugu sarreysa horyaalka, (0 guuldarro, 3 barbaro iyo 8 guuldarro).
>- Arsenal ayaa kaliya labo jeer shabaqeeda gool ka ilaashatay 24-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay marti ahaayeen, iyadoo labadaas kulan ay ku dhamaadeen min 1-0 oo ay kaga adkaadeen kooxaha Watford iyo Newcastle.
>- Kani waxa uu noqon doonaa kulankii 50-aad ee macallin Unai Emery uu hoggaamiyo Arsenal horyaalka Premier League, 49-kii kulan ee hore uu u soo hoggaamiyey macallinka reer Spain kulammada horyaalka Kooxda Gunners midkoodna ma uusan dhammaan wax goolal la’aan ah – iyadoo keliya George Burley (67 kulan), Ossie Ardiles (54 kulan) iyo Joe Royle (53 kulan) ay hoggaamiyeen kulamo badan oo aan barbaro goolal la’aan ah ku dhammaan laga bilaabo markii ay bilaabeen xirfaddooda maamul ee Premier League.
>- Weeraryahanka Kooxda Leicester ee Jamie Vardy ayaa dhaliyey siddeed gool siddeediisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu horyaalka Premier League ku wajahay Arsenal.
Horudhac: Celta Vigo vs Barcelona... (Barca oo rajaynaysa inay ka soo kabato natiijooyinkeedii xumaa ee ugu dambeeyey)